Nano Spray ရဲ့ အသုံးပြုပုံလေးကို ပြောပြပေးမယ်နော် ? Nano Spray ရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ ခလုတ်ကို ဆွဲချလိုက်ရင်တော့ ရေငွေ့စပြီး ထွက်လာမှာပါ။ ခလုတ် ပြန်မဆွဲမတင်ခြင်း ရေငွေ့ကထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုနေချိန်မှာတော့ မီးအပြာရောင် လင်းနေပါမယ်။ စက်ရဲ့ အပေါ်ဘက်အခန်းအတွင်းမှာ ရေဖြည့်ပေးထားဖို့တော့လိုမယ်နော်။ စက်ကို အတည့်အနေအထား သုံးပေးခြင်းက ရေငွေ့ထွက်ဖို့ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အချိန်မှာ မျက်နှာနှင့် (၁၀) စင်တီမီတာအကွာမှ ရေငွေ့ဖျန်းသင့်ပြီး မိတ်ကပ်လိမ်းထားပါက (၁၅) စင်တီမီတာမှ ရေငွေ့ဖျန်းသင့်ပါတယ်။ စက်ရဲ့ အပေါ်ဘက်အခန်းအတွင်းကို ရေဖြည့်ဖို့အတွက် စက်ကို ဇောက်ထိုးကိုင်ပြီး လှည့်ဖွင့်ရပါမယ်။ ရေဖြည့်ပြီး ပြန်တက်ချိန်မှာလည်း စက်ကို ဇောက်ထိုးကိုင်ပြီး လှည့်တပ်ရင်တော့ ရေထွက်ကျတာ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ Nano Spray ရဲ့ အသုံးပြုပုံလေးကို သိပြီဆိုတော့ မျက်နှာလေး အချိန်တိုင်း ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေပြီပေါ့.... ? Nano Meter Spray Water တစ်ခု ၁၇,၀၀၀ ကျပ်
ဘယ်နေရာသွားသွား အလွယ်တကူဆောင်သွား ? ဘယ်လိုအသားအရေအမျိုးအစားပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို ❄️ အေးမြတဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ? Nano Spray က ရေဓာတ်လိုအပ်နေတဲ့ အရေပြား အတွင်းလွှာအထိ ထိရောက်စွာ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ အလွန်သေးငယ်တဲ့ ရေမော်လီကျူးလေးများက အရေပြားကို နှိုးဆွမှု လုံးဝမရှိတာကြောင့် Sensitive Skin များလည်း စိတ်ချလက်ချ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ☺️ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတာကြောင့် အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပြီး Nano Spray အောက်မှာ ဘက်ထရီသွင်းလို့ရတဲ့ အပေါက်ပါလို့ ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းဘက်ထရီကိုလဲ အရေးပေါ်အားသွင်းလို့ရပါတယ်။ Nano Meter Spray Water တစ်ခု ၁၇,၀၀၀ ကျပ်
လန်းဆန်းသွားမယ့် Feeling ? Nano Spray ဟာ ရေကို အရမ်းသေးငယ်တဲ့ မော်လီကျူးလေးတွေအဖြစ် ထုတ်လွှတ်ပေးတာကြောင့် မျက်နှာအရေပြားအတွင်းကို လွယ်လွယ်ကူကူ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး စိမ့်ဝင်နိုင်ပါတယ်။ ရေဓာတ်လိုအပ်နေတဲ့ အရေပြားအတွင်းဆုံးအလွှာထိ ထိထိရောက်ရောက် ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပါတယ်။ အချိန်မရွေး နေရာမရွေး လွယ်ကူစွာသယ်ယူနိုင်ပြီး ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးလို့ရတာဖြစ်လို့ ရေဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့အသားအရေနဲ့ လန်းဆန်းတဲ့ Feeling ကို ရရှိစေမှာပါ.... Nano Meter Spray Water တစ်ခု ၁၇,၀၀၀ ကျပ်
Treatment လုပ်ပြီး မျက်နှာလေး ကျန်းမာစိုပြေစေဖို့ Nano Spray ကို သုံးနော် ? မျက်နှာ Treatment ယူနေချိန်မှာ အသားအရေကို နှိပ်နယ်ပေးမယ်ဆိုရင် ချွေးပေါက်များ ပွင့်လာပြီး အရေပြားက အစိုဓါတ်ဖြည့်တင်းဖို့ အသင့်အနေအထားကို ရရှိလာပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ Nano Spray နဲ့ ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးမယ်ဆိုရင် အရေပြားအတွင်းပိုင်းအထိ ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးတာဖြစ်လို့ အရေပြား ကျန်းမာစိုပြေမှုကို ရရှိစေပါတယ်။ Nano Meter Spray Water တစ်ခု ၁၇,၀၀၀ ကျပ်
အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ Nano Spray ? Nano Spray က ရေဓာတ်လိုအပ်နေတဲ့ အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးအတွက် ရေအပြားအတွင်းလွှာအထိ ထိရောက်စွာ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ လွယ်ကူစွာ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်တာကြောင့် အရေပြားစိုပြေတင်းရင်းမှုကို ရရှိစေပါတယ်။ Nano Meter Spray Water တစ်ခု ၁၇,၀၀၀ ကျပ်
Normal Skin များ အတွက် Nano Spray ? Nano Spray က ပုံမှန် အသားအရေကို ပုံမှန် ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးပြီး ပိုမို ကျန်းမာတဲ့ အရေပြားကို ရရှိစေပါတယ်။ ရေဓာတ်လိုအပ်နေတဲ့ အရေပြား အတွင်းလွှာအထိ ထိရောက်စွာ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ Nano Meter Spray Water တစ်ခု ၁၇,၀၀၀ ကျပ်
Oily Skin များ အတွက် Nano Spray ? Nano Spray က အဆီပြန်သော အသားအရေအတွက် အလွန်သေးငယ်သော ရေမော်လီကျူးများက ချွေးပေါက်များ အတွင်းရှိ အဆီပိုများကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ မျက်နှာအရေပြားအတွင်းပိုင်းအထိ ထိရောက်စွာ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးတာမို့ အရေပြား ကျန်းမာစိုပြေမှုကို ရရှိစေပါတယ်။ Nano Meter Spray Water တစ်ခု ၁၇,၀၀၀ ကျပ်
Dry Skin များ အတွက် Nano Spray ? ခြောက်သွေ့သော အသားအရေကို Nano Spray ကို နေ့စဉ်အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင် ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေအောင် ဖြည့်တင်းပေးလို့ရပါတယ်။ ရေကို အလွန်သေးငယ်တဲ့ မော်လီကျူးလေးများအဖြစ် တုန်ခါမှုနှင့် ဖန်တီးထုတ်လွှတ်ပေးတာကြောင့် အရေပြားအတွင်းသို့ လွယ်ကူစွာ စိမ့်ဝင်နိုင်ပါတယ်။ Nano Meter Spray Water တစ်ခု ၁၇,၀၀၀ ကျပ်